Mpanamboatra sy mpamatsy galeriam-bokatra - Orinasa galeriam-bokatra mora vidy
Ny vokatra famonoana alimo aliminioma dia ampiasaina amin'ny elektronika, fiara, motera, fitaovana ao an-trano ary indostrian'ny serasera sasany. Ny vokatra firavaka aliminioma avo lenta, avo lenta, avo lenta ihany koa dia ampiasaina amin'ny indostria manana fepetra avo lenta toy ny fiaramanidina lehibe sy sambo. Ny tena fampiasana dia mbola ao amin'ny ampahany amin'ny fitaovana sasany.
Ny singa fototra amin'ny vy tsy misy fangarony dia ny karbaona, ny chromium, ny nikela ary ny singa firaka sasany toy ny molibdenum, ny varahina ary ny azota. Ny singa mampifangaro indrindra amin'ny vy vy dia ny Cr (chromium), ary rehefa tonga amin'ny sanda iray ny atiny Cr, dia mahazaka fanoherana ny harafesina ny vy. Noho izany, ny vy tsy dia matevina amin'ny ankapobeny dia mirakitra farafahakeliny 10,5% an'ny Cr (chromium).
Ny varahina dia firaka vita amin'ny varahina sy zinc, ary fitaovana mety tsara amin'ny famokarana ny masinina (ao anatin'izany ny forces). Ny fanariana maty dia nohafohezina toy ny forging, izay fomba fanariana izay alefa ao anaty efitrano fanaovana gazety ny ranon-tsolika an-idina, fenoina haingam-pandeha ny lavaky ny lasitra vy, ary ny ranon-tsiranoka dia mihamafy eo ambany fanerena hamorona casting. Ny tombotsoan'i Ouzhan dia ny namboarina hatrany amin'ny valves varahina, izany hoe valves vita amin'ny varahina, izay faritra indostrialy. Ny fizotry ny famokarana dia novolavolain'i Ningbo, Zhejiang any Sina.
Ny varahina dia firaka vita amin'ny varahina sy zinc, ary fitaovana mety tsara amin'ny famokarana ny masinina (ao anatin'izany ny forces). Ny fanariana maty dia nohafohezina toy ny forging, izay fomba fanariana izay alefa ao anaty efitrano fanaovana gazety ny ranon-tsolika an-idina, fenoina haingam-pandeha ny lavaky ny lasitra vy, ary ny ranon-tsiranoka dia mihamafy eo ambany fanerena hamorona casting.
Ny fametahana plastika dia ahitana fitaovana isan-karazany mety amin'ny fametahana milina, nylon (PApolyamide), PC (polycarbonate), ABS (co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), PMMA (plexiglass, poly Acrylic methyl ester), polytetrafluoroethylene (F-4), epoxy (EP). Rehefa mifantina fitaovana ho an'ny sary famolavolana, ny plastika injeniera mety dia tsy maintsy voafantina arakaraka ny tontolon'ny fampiasana sy ny fitakiana mifanentana amin'ny faritra masinina CNC.